Ooredoo Myanmar - Facebook Page Review - LikeAlyzer
Review of Ooredoo Myanmar
Pagename: Ooredoo Myanmar [Visit]
Code for Change Myanmar
Wow, there arealot of amazing things you can do with 5,739,749 likes.
Likes, Comments & Shares per post: 11,527
17 Arabsat 88
18 Oi 88
19 Optimum 88
20 Ooredoo Myanmar 88
21 Claro Paraguay 87
Top5Posts by Ooredoo Myanmar
2017-05-29 လွယ်ကူစွာဝယ်ယူနိုင်ခြင်း၊ ဖုန်းငွေလွှဲပြောင်းပေးနိုင်ခြင်း၊VAS... 48439 989 682
2017-05-28 အဝေးရောက်နေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့၊ Facebook... 45901 1478 860
2017-05-31 📢😀အူရီဒူးရဲ့ ရိုးရိုးလေးအစီအစဉ်လာပါပြီ။☝🏻တစ်မိနစ်ကို ၁၅ကျပ် တည်းနဲ့... 33861 2722 2701
2017-06-04 ကိုရီယားမလေးတစ်ယောက်သီချင်းဆိုနေသလို ဝိုးခနဲဖြစ်သွားအောင် သီဆိုနိုင်တဲ့... 15057 425 6802
2017-05-27 သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အပြင်သွားရင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊TV အလွယ်တကူမရနိုင်တဲ့... 32160 554 639
Unanswered Posts by Others - Ooredoo Myanmar
2013-11-17 http://yangonmegaexpo.com/index.php?id=59 0
2013-11-16 အလုပ်လျှောက်ချင်လို့ပါ.... CV Form ကို ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ??? 0
2013-11-15 the best telecom 0